Doorashooyinkii kuraasta Hop154 iyo Hop103 oo la laalay | KEYDMEDIA ONLINE
Doorashooyinkii kuraasta Hop154 iyo Hop103 oo la laalay
Kursigaan oo baarlamaankii 10-aad uu ku fadhiyay Maxamed Sheekh Cismaan Jawari, ayaa laga hor istaagay inuu u baratamo, waxaana Baydhabo lagu soo siiyay Maxamed Cali Xasan.
BAYDHABO, Soomaaliya - Guddiga Doorashooyinka Heer Federal (FIET), ayaa wax kama jiraan ka soo qaaday doorashooyinka kuraasta Hop154 iyo Hop103, kuwaas oo Guddiga Maamulka Doorashooyinka Koonfur Galbeed, uu shaqsiyaad gaar ah u xiray una doortay todobaadkii hore.
Warka ka soo baxay FIET, ayaa lagu sheegay in guddigu baaritaan kadib ogaaday in kuraastaan aan la marin habraacyada rasmiga ah ee doorashada, sidaas daraaddeed dib loo celiyay doorashadii hore, mar kalana la qaban doono doorashadooda.
“Kursiga sumaddiisu tahay Hop154, habkii loo maray doorashadiisa ma aysan waafaqsanayn habraacyada doorashada, iyadoo murashax ka mid ah kuwii u tartamayey uusan buuxin shuruudihii murashaxnimada qodobkiisa 3aad ee heshiiskii 1 Oktoobar 2020, Sidan daraadeed natijada kursigaas oo ka dhacday Baydhabo 29 Nofeembar 2021 waa waxba kama jiraan, doorashadiisuna dib ayaa loogu noqonayaa”. Ayaa lagu yiri warka ka soo baxay FIET.
Sareeda Maxamed Cabdalla, ayaa 29 Nofeembar, Baydhabo loogu boobay Hop154, waxaana malxiis u ahaa Fardowsa Ibraahim Cabdi.
“Kursiga uu tirsigiisu yahay Hop103, iyadoo la tix raacayo go'aanka guddiga ee ku xusan warqadda sumadeedu tahay (TXR/GHD/0056/21) soona baxday 27 Noofeembar 2021, go'aankaas oo lagu hakiyey in la qabto dorashadiisa, sidaasdarteed, marka habraaca la dhamaystiro ayaa la qabanayaa doorashadiisa”. Ayaa sidoo kale, lagu yiri warka.
Sidoo kale, guddigu wuxuu sheegay in ay jiraan kuraas ay muranno ka soo noqdeen oo ka soo baxay Galmudug, kuwaas oo ay hadda gacanta ku hayaan guddiga xalinta khilaafaadka.